Unyanzvi | Ningbo Horizon Magnetic Technologies Co, Ltd.
Ningbo Horizon Magnetic Technologies Co, Ltd. inogadzira yakatwasuka inogadzira isingawanzo pasi Neodymium magineti uye ayo akafanana magineti magungano. Tinogona kurerutsa chirongwa chako che projekiti uye nekukubatsira iwe mukugadzira chigadzirwa chitsva kubva pane zano kusvika pakuendesa.
Neodymium Magnet Kugadzira
Neodymium magineti ekugadzira ndiro dombo repakona reHorizon Magnetics zano rekuona kugadzikana uye kuenderera kwekugovera kwemhando yepamusoro magineti uye magineti masisitimu kunyanya mune yakasarudzika nguva, semuenzaniso, kupenga kwemitengo kukwira uye kushomeka kwekushomeka kwezvinhu zvisingawanzoitika zvepasi. Iyo yepakati-saizi yekugadzira inokwana, mazana mashanu ematani eNeodymium magineti inodzorwa zvakanyanya pasina kuwedzera chinzvimbo asi manejimendi kuvandudza kuitira kuti isangane nevatengi vedu 'inoomesesa inodikanwa.
Dhizaini uye Injiniya
Tinoda chinetso uye tinofarira yakagadzirirwa magineti mhinduro kuzadzisa vatengi 'akasiyana mabasa. Ruzivo rwedu rwehunyanzvi mune magnetics uye ruzivo rwakakwana mune yakazara isingawanzo pasi peNeodymium magineti masisitimu anotigonesa kupa vatengi kurudziro inoshanda kana dhizaini dhizaini kutanga kubva padanho repfungwa kusvika kuchinhu chekupedzisira chechigadzirwa. Uyezve, revhisi reinjiniya rinowanikwa kubatsira vatengi kukwidziridza zvigadzirwa zviripo.
Imba yekugadzira uye Kugadzira
Yedu pachedu dzakasiyana-siyana mamiriro-e-eunyanzvi ekugadzirisa michina inoita nguva yekuendesa uye mhando yemagineti block machining nesimbi chikamu chinogadzira chiri pasi pekutonga. Inogona kusangana nezvinodiwa nevatengi senge diki diki, kushivirira kwakasimba, kuendesa nekukurumidza, maitiro akaomarara, nezvimwewo kunyanya kune chigadzirwa chitsva, in-house capacity inogona kuburitsa prototype munguva yekumhanyisa maitiro ekuvandudza uye kudzora zvakavanzika zvekugadzira zve zvigadzirwa zvitsva zvakavanzika.
Seye anovimbika isingawanzo pasi magineti mutengesi, Horizon Magnetics inovavarira yeepamusoro mhando nhanho kugutsa zvinodiwa nevatengi kuburikidza nekuenderera mberi kwekuvandudza. Yepamberi otomatiki yekuongorora michina inogonesa kutsanya uye kwakaringana kuongororwa kwemagineti flux uye kona kutsauka kuverengera magineti ese ehoriyamu inoenderana nehunhu hunodiwa ne zero kuremara kwekushandisa kwakasimba senge mota. Yedu isingawanzo pasi magineti uye magungano ndeye RoHS uye REACH kutevedzera.
Imwe-Stop Kupa kune Yakakura Magnet Zvigadzirwa
Mhando uye hukuru hwemitengo inokwanisika yakaenzana yeNeodymium magineti magungano senge hove dzemagineti, magineti ekuvhara, magineti ehari, magineti ehuku uye magineti emahofisi anowanikwa muchitoro chekukurumidza kutumira. Neodymium magineti kugadzirwa uye-mumba ekugadzira zvinogona kugadzirisa akasiyana siyana asingawanzo epasi magineti masisitimu pakukumbira Hunyanzvi mune magnetics inoita kuti titore zvimwe zvekusingaperi magineti zvinhu zvine zvidiki asi zvichidikanwa kuti zvibatanidzwe mukutakura kumwe chete.